Fandrosoana 14 mety hisy fiantraikany amin'ny varotra mailakao amin'ny 2015 | Martech Zone
Fandrosoana 14 mety hisy fiantraikany amin'ny varotra mailakao amin'ny 2015
Alatsinainy Martsa 2, 2015 Douglas Karr
Ankoatra ny modely mailaka mamaly, ny teknolojia ao ambadiky ny mailaka dia tsy niova firy tao anatin'ny folo taona lasa. Na izany aza, amin'ny maha iray amin'ny tamberim-bidy matanjaka indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing, ny mpivarotra dia mahita fiverenana lehibe kokoa rehefa mampiasa teknolojia tanteraka izy ireo miaraka amin'ny fandefasan-kafatra nozarain'izy ireo.
Ireto misy fandrosoana 14 amin'ny teknolojia izay misy fiantraikany amin'ny marketing amin'ny mailaka
Personalization amin'ny fotoana tena izy mifototra amin'ny data cross-channel.
Big data ny loharanom-pahalalana dia hamelona ny atiny azo vinavinaina sy mialoha amin'ny mailaka.
Hafatra iraisana paikady eo amin'ny mailaka sy ny varotra sosialy.
Hashtag Mirongatra ny fampiasana ny zana-dahatsoratra mailaka.
HTML nohatsaraina ny fifandraisana amin'ny mpanjifa dia hisy fiantraikany amin'ny fomba famolavolana sy fandefasana mailaka.
Marketing automation hitohy hahita fitomboan'ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola.
Antso avo-ho-hetsika amin'ny andalana ny lohahevitra dia hiteraka taha ambony kokoa.
Mamerina ny atiny ary ny fihenan'ny votoatiny dia hampisy lanjany ireo misoratra anarana.
Micro-lasibatra miaraka amin'ny fisarahana sy ny personalization mifototra amin'ny hetsika Internet hafa.
Ivon-toerana preferences dia hanome fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpanjifa hampihenana ny churn.
Mpanjifa mailaka Smart hitohy handroso miorina amin'ny fahazarana laharam-pahamehana sy ny famakiana.
Email marketing dia hivelatra mihoatra ny fiovam-po eo amin'ny farany ambanin'ny fantsom-pahalalana ary ho hita eo am-panaovana ny fiheverana ny ambony fantsona.
Fiarovana amin'ny fiarovana dia hanohy handroso ny fanamarinana ny mailaka amin'ny fomba toa DMARC.
Wearables dia hamela ny famakiana ny mailaka mitaky lamina famolavolana mahaliana kokoa.
Tags: 2015ambany fantsonamiantso amin'ny asapaikady mailaka mirindractamailaka sy sosialymailaka mpanjifafandraisana an-tanana amin'ny mailakatenifototra mailakainfographic mailakamailaka Marketinginfographic marketing amin'ny mailakamoanina mailakafanatsarana ny mailakafiarovana amin'ny mailakatsipika momba ny mailakatenifototraaterineto ny zavatraautomation marketingfitaovana automation marketingpaikady fandefasan-kafatramicro-lasibatraivon-toerana mpitiarepurposing atinysecurityambony fantsonawearables
Efa namorona bokotra hiantsoana andraikitra amin'ny Facebook ve ianao?